Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Qalab Cusub oo Ka-hortagga Kufsiga
Abuurayaasha SafetyNet waxay soo bandhigi doonaan cayaaryahan wax-ka-beddeli kara dagaalka lagu joojinayo weerarka galmada iyo ka ganacsiga dadka ee xaflad samafal oo ku taal bartamaha magaalada Los Angeles Febraayo 12, 2022.
SafetyNet waxay bixisa koob ama ul walaaq, marka la soo bandhigo dawooyinka "naqshadeeye" sida GHB, rohypnol, iyo ketamine, isbeddelaya midab ka soo baxa guduudan, una digaya cabbista in daroogo la geliyey cabitaankooda.
"Ujeedadu waa in la ogaado in la isku dayay in lagu daroogo cabitaanka, taas oo yaraynaysa fursadaha kufsiga ama afduubka," ayay tiri Reena Sehgal, oo ah qareen fadhigiisu yahay Los Angeles oo matalaya SafetyNet. "Dadku si sahlan ayey u nasan karaan iyagoo og cabitaankooda inuu ogeysiin doono haddii qof uu isku dayo inuu ku xad-gudbo xuquuqdooda."
Ameerikaanku waxa uu ku kacayaa kufsi ama faraxumayn qiyaastii 68 ilbiriqsi kasta, sida ay sheegtay ururka ka hortagga galmoodka ee RAINN, iyada oo boqolkiiba shan ka mid ah xadgudubyada galmada ee la soo sheegay lagu sifeeyay inay yihiin daroogo. Alaabta, oo uu ansixiyay John Hopkins, ayaa hoos laga dhigi doonaa galaaska.
Koobabka SafetyNet iyo kiciyeyaasha waxay ahaan doonaan ganacsi ahaan marka maalgelinta la helo. Alaabta ayaa hadda la filayaa inay ku dhacaan khaanadaha dukaamada raashinka, dukaamada khamriga iyo meelo kale May 2022.
"SafetyNet lafteedu waxay yaraynaysaa xadgudubyada galmada iyadoo la ogaanayo daroogooyinkan, laakiin laga yaabee xitaa ka sii muhiimsan, jiritaankeeda ayaa u adeegi doona sidii wax looga hortago," Sehgal ayaa yidhi. "Kufsigu iyo kuwa dadka tahriibiya ayaa laba jeer ka fikiri doona haddii ay jirto badeeco diyaar ah oo la heli karo oo qaban doonta falka."
Dakhliga ka soo baxa dhacdada samafalka ayaa ka faa'iidaysan doona RAINN, Jacayl la'aanta, iyo kuwa kale ee aan faa'iido doonka ahayn ee u heellan joojinta xadgudubka galmada iyo ka ganacsiga dadka.
SafetyNet waxaa kafaalo qaaday Sehgal Law PC, Lastine Impressions, iyo Soo saarista Vase-ka jaban. Hadafkeedu waa in si weyn loo dhimo tirooyinkaas oo loo keeno badeecad u oggolaanaysa dadka inay ku nastaan ​​​​si fudud iyadoo la og yahay in cabitaankoodu ammaan yahay in la isticmaalo.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa u dabaaldegtay maalinta Afrika 2022